जीवनशैली तथा राेचक तथ्य | नेपाली जनता :: Nepali Janta: | Page 4
यौन चाहाना जागेपछि युवतीले बनाउछन् यस्ता बहाना
पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौनिक चाहना पनि शब्दमै ब्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको छ । यहाँ महिलाले यौन सम्बन्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ५ ब्यवहारको चर्चा…
उक्त अनुसन्धानका प्रमुख डेबी हेर्बिनिकले युवामा कन्डमको बारेमा गलत धारणा रहेको तथा…
बिहेअघि सेक्स गरेको योनीबाट थाहा हुन्छ ?
महिलाले विवाह अगाडि यौनसम्पर्क राखे नराखेको कुरा थाहा पाउन सामान्य मान्छेले पहिलो यौन सम्पर्कको बेला रगत आए नआएको वा दुखे नदुखेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ ।
अर्कातिर पुरुषमा लिंगको अगाडिको छाला फाटे नफाटेको, पछाडिसम्म खुलेरनखुलेको…
यसरी गर्नुस महिला हुन्छन् पानी पानी, महिलाले बढी आनन्द लिने सेक्स पोजिसन !
काठमाडौं । सेक्स संसारको सर्वोत्कृष्ट आनन्ददायक चीज हो, जसका कारण सेक्स सधैं चर्चाको शिखरमा रहन्छ । सेक्सलाई अझ आनन्दायक बनाउन विभिन्न शैली, पोजिसन, पहिरन, बेड, स्थानजस्ता कुराको पनि विशेष ख्याल गरिन्छ ।महिलालाई सबैभन्दा बढी मज्जा दिने सेक्स पोजिसन के…
ओठबाट थाहा हुन्छ, युवतीको योनीको आकार !
ओठले महिलाको सौन्दर्यसँगै उनीहरुको यौन व्यवहार वा चालचलनका विषयमा समेत बुझाउँछ ।
शरीरका हरेक अंगहरु हाम्रा अन्य अंगहरु कुनै न कुनै हिसाबले अन्र्तसम्बन्धित नै रहेका हुन्छन् । जस्तो की नाभी नाइटो र मानव स्वास्थ्यका बीचमा गहिरो सम्बन्ध रहेजस्तै महिलाको ओठले…
कस्तो हो यो योनि गोरो बनाउने प्रतिश्पर्धा ?
थाइल्याण्ड । थाइल्याण्डका मानिसहरुलाई यतिबेला अनौठो रुचि जागेको छ । विशेष गरेर पुरुषहरु आफ्नो गुप्ताङ्ग गोरो बनाउन जुटेका छन् ।
बिबिसीमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार एसियाली राष्ट्रहरुमा गोरो बन्ने कोशिस नौलो भने होइन । किनभने यहाँ कालो रंगलाई लिएर अनौठो सोच…
गोलभेँडाको सूप खानुका फाईदा यस्ता छन ? जानी राखाैं ?
गोलभेँडा बिना हाम्रो तरकारी नै खल्लो हुन्छ । हामीले गोलभेँडा चट्नि, तरकारीमा, सुप बनाएर खान सकिन्छ।
जान्नुहोस् गोलभेँडाको सूप खानुका फाईदा:
१. हड्डिको लागि लाभदायक: यसमा पाइने भिटामिन के र क्याल्शियमले हड्डिलाई बलियो बनाउनमा मद्दत गर्छ । गोलभेँडाको सूप दैनिक पिउनाले…
सुत्दा मोटो सिरानी प्रयोग गर्ने कि पातलो ?
काठमाडौ । आममानिसहरुको जिज्ञासाको विषय, सुत्दा मोटो सिरानी प्रयोग गर्ने कि पातलो ?यो कुरा तपाईको सुताईको पोजिसन र शरिरको संरचना अनुसार फरक हुन्छ । तर कतिपय डाक्टरहरुले पातलो सिरानी प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । यसै विषयमा हामीले क्रोनिक…
आफुभन्दा कम उमेरका विद्यार्थीसँग शिक्षिकाले अवैध सम्बन्ध राखेपछि
एजेन्सी। प्रेमलाई न उमेर ले छेक्छ न जात धर्मले रोक्छ । आज हामीले कुरा गर्न गइरहेको प्रेम सम्बन्ध पनि यस्तै फरक प्रकारको रहेको छ । भारत हरियाणा राज्यको पानीपात जिल्लामा शिक्षिका र विद्यार्थीबीच अबैध सम्बन्ध रहेको जानकारी सार्वजनिक भएको…
माया एउटा मिठो आभास हो । कसैको मायामा परिन्छ भने एक झलक पाउन पाए संसार जितेजस्तै भावनाहरु मनमा बारम्बार आइरहन्छन् । तर, धेरैको माया सजिलै बस्छ पछि सम्बन्ध बिग्रदै गएपछि एकाअर्काप्रति दोषारोपण गर्ने बानी पर्छ । माया लगाउन त…
साला फेसबुक !! 161 views
सभामुख चयन गर्न १७ नागरिक अधिकारकर्मीको माग5views